Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-by - China Rubber Track Factory
Ny lalana vita amin'ny fingotra dia manana tombony amin'ny lanja maivana, hovitrovitra kely, tabataba ambany, fametahana avo lenta, tsara
Fifanarahana, tsy misy fahasimbana amin'ny velaran'ny arabe, angano tsara indrindra any amin'ny tanimboly. Tsara indrindra amin'ny fanamboarana tanàna sy ny toeram-piompiana.
dian-tongotra ho an'ny Kobelco, Hyundai, Hitachi, Kubota, Bobcat, Takeuchi ho an'ny mpitrandraka, mpitrandraka, mpamadika, mpijinja, kamio, traktera
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Rubber Pad miaraka amin'ny antoka 1 taona
Range ny fampiharana:
Excavator, Paver, Tractor, Masinina mamaky, Masinina tsy mihady, Masinina manaikitra, Milina fandavahana.
1. Bolt-on: Miasa raha toa ka misy lavaka mialoha ny fandavahana ireo pad vy misy anao.
2. Clip-on: Mampiasà clip izay manarona manodidina ny pad ary miasa amin'ny ankamaroan'ny fanao pad.
3. Chain-on: Bolt mivantana mankany amin'ny rojo ka tsy misy kiraro telo-mpiorina tafiditra ao.
BONOVO Undercarriage Parts Excavator 450mm Rubber Pad ho an'ny PC60 PC75 PC78MR
Ny fingotra dia karazana vokatra nohatsaraina sy nitarina tamin'ny talantalana vita amin'ny kodiarana, izy ireo dia manomboka napetraka amin'ny lalan-by, mora ny mametraka azy ary tsy manimba ny tampon'ny làlana.
Excavator, Paver, Tractor, Masinina mamaky, Masinina tsy mihady, Masinina manaikitra, Milina fandavahana ......
Rojo famandrihana BONOVO anaty rojom-baravarana vita amin'ny rojika vita amin'ny rojo vy
Chain-on: Bolt mivantana mankany amin'ny rojo vy ka tsy misy kiraro telo-mpiorina tafiditra ao.
BONOVO Undercarriage Parts Excavator 500HD Clip amin'ny Rubber Pad
Clip-on: Mampiasà clip izay manarona ny pad ary miasa miaraka amin'ny ankamaroan'ny fanao pad.
Ny Rubber Track Pads dia manome fifindrana mora foana amin'ny fiasa amin'ny loto amin'ny alàlan'ny vy mankany amin'ny fiasana amin'ny faritra marefo izay ilana fiarovana na fitarihana.
Izy ireo dia vita avy amin'ny fingotra mateza, nohamafisina, azo hajanona ho an'ny fampiasana vetivety na fohy amin'ny sehatra samihafa.
BONOVO Undercarriage Parts Bolt-on Rubber Pad ho an'ny 1-30 taonina Excavator
Bolt-on: Miasa raha toa ka manana lavaka mialoha ny fandavahana ireo pad vy misy anao
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Rubber Pad SH120 SH200 SH220
1.Ny fahasimbana manodidina
3. fanerena ambany tany
BONOVO Undercarriage Parts HD200 Rubber Pad ho an'ny Bulldozer